Nin Dhintay Oo Loo Doortay In Uu Mayar Ka Noqdo Magaalada Deveselu – Heemaal News Network
Nin Dhintay Oo Loo Doortay In Uu Mayar Ka Noqdo Magaalada Deveselu
Maayar u dhashay dalka Rumaaniya oo toddobaadyo ka hor u geeriyooday faayraska corona ayaa guul weyn ka soo hoyey doorashada deegaanka ee magaalada Deveselu ka dhacday.
Ion ayaa marki seddexaad loo doortay inuu noqdo Maayarka magaalada Deveselu oo ku taalla Koonfurta Rumaaniya isaga oo helay cod dhan 64%.
Mas’uuliyiinta doorashada dalkaasi waxay sheegeen Maayarka oo aan nooleyn in markale la doorto iney keentay sawirradi ololaha doorashada u ku galay oo magalada sidooda ugu dhajisan oo aan la qaadin geeridiisa kaddib.
Ion Aliman ayaa ku geeriyooday caasimadda dalka Rumaaniya Bucharest 15-kii bishan September.
Mas’uuliyiinta doorashada ugu sarreysa oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegeen marki la ogaaday guusha iney raacday maayarka aan nooleyn in la qabtay doorasha labaad balse dadka deegaanka waxay booqdeen qabriga maayarka geeriyooday si ay ixtiraam ugu muujiyaan.
Muuqaal baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya dad aad u tira badan oo booqasha ku tagay halka lagu aasay Mr Aliman.
Muuqaal laga soo duubay shacabka booqashada ku tagay qabriga maayarka geeriyooday waxaa lagu arkayey mid ka mid ah shacabka oo leh Mr Aliman ‘Waa Guushaadi”.
“Wuxuu inoo ahaa Maayar aad u wanaagsan,” ayey tiri haweney u warrantay talefishiinka maxalliga ee ProTV oo ay soo xigatay wakaaladda wararaka ee Reuters.
“Wuxuu garab u ahaa magaalada oo dhan, wuxuuna ixtiraami jiray sharciga. Uma maleynayo inaan heli doonno maayar isaga la mid ah”.
Mr Aliman, oo horay uga tirsanaa ciidamada badda Rumaaniya wuu ka tirsanaa xisbiga PSD ee ay siyaasaddiisu bidixda u janjeedho, iyada oo ay da’diisu ahayd 57 jir.
Guusha u soo hoyatay Maayarka ayaa noqotay mid faraxd gelisay xisbiga PSD uu ka tirsanaa. Xisbiga ayaa guuldarro aad u weyn kala kulmay magaalooyin badan iyo kuraas heer deegaan isaga oo la tartamay xisbiyada kala ah USR-PLUS iyo PNL.
Xisbiga PSD ayaa xilka ka degay sanadki hore kaddib marki ay dowladda Rumaaniya baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida kala noqday dalkaasina ka dhaceen mudaharadyo ballaadhan oo looga soo horjeedo dib u habeynta garsoorka Midowga yurub iyo musuqmaasuq.
Guushan uu gaaray Mr Aliman ma aha guushi ugu horreysay oo uu gaaro musharraxa la doorto isaga oo aan nooleyn.
2008-ddii Neculiai Ivascu ayaa markale loo doortay maayarka magaalada Voinesti oo ku taallo waqooyiga bari ee dalkaasi isaga u geeriyooday xanuun beerka kaga dhacay.
Mas’uuliyiinta doorashada ayaa marki dambe ku dhawaaqay xubinki kaalinta labaad galay ee Ivascu la tartamayey oo lagu magacaabo Gheorghe Dobrescu inuu guuleystay.
Madaxwayne Qoor-qoor Oo Caawa Muqdisho U Yimid Dhameystirka Heshiiska Doorashada.(Sawiro)
Kooxo Xagjir Ah Oo Laga Cabsi Qabo In Ay Qasaan Doorashada Maraykanka